Tababare Jose Mourinho oo loo Magacaabay Hogaamiyaha Tottenham – Geelle Mag
Tababare Jose Mourinho oo loo Magacaabay Hogaamiyaha Tottenham
Ali Ahmed Posted On November 20, 2019
Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa loo magacaabay tababaraha Tottenham Hotspur, isagoo badalay tababarahii laga ceyriyay shaqada ee Mauricio Pochettino, wuxuuna noqday hadal heynta kubadda cagta ee maanta, maadaama uu yahay macalin guulo badan gaaray.
Tababare Jose wuxuu u saxiixay Spurs heshiis seddex sano iyo bar ah, waxayna noqoneysaa kooxdiisii seddexaad uu leyliyo, kana dhisan Ingiriiska kadib Chelsea iyo Manchester United.
Macalinka reer Portugal wuxuu galabta bilaaban doonaa waayahiisa kooxda ka dhisan waqooyiga London, tababarkiisii ugu horreeyay ayuu sidoo kale bixin doonaa, sidoo kalena waxaa aad loo hadal hayaa kulamada kusoo socda, maadaama ay kooxda boos aan wanaagsaneyn fadhiso.
Jose Mourinho imaatankiisa hadal heyn badan ayuu u abuuray Tottenham Hotspur, waa kooxda ugu badan ee maanta ay ka sheekeynayaan warbaahinta kubadda cagta dunida, intaasna waxaa sabab u ah macalinka darajada sare ee u dhashay Portugal.
DEG DEG: Gabar ka tirsaneyd Qoyska reer Elman oo Muqdisho ku geeriyootay